सौन्दर्य – Page7– rastriyakhabar.com
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउने १२ सजिला घरेलु उपायहरु
आजभोली मोटो मानिसको संख्या तेज गतिले बढि रहेको छ । धेरै मानिसहरुले शुरुवातमा मोटोपनमा त्यति ध्यान दिदैंनन् । तर जब मोटोपन धेरै बढेपछि त्यसलाई घटाउन घण्टौं पसिना बगाउँछन् । मोटोपन घटाउनको लागि खानपीनमा सुधार जरुरी छ । केही प्राकृतिक चीजहरु यस्ता हुन्छन् । जस्को प्रयोगले तौललाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ..
सहबास गर्दा चरम आनन्द लिने हो यसो नर्गनुस् !
काठमान्डौ । नियमित सहबास स्वास्थ्यका लागि फाइदा जनक हो । सहबासले तनाव हटाउन सहयोग पुर्याउछ । यो महिला र पुरुष बीच हुने यो कार्य आनन्द दायक हुन्छ । तर हामीले जानेर नजानेर सेक्स गर्नु अघि यी चिज खादा आनन्द को सट्टा झन् तनाव गराउछ । सेक्स पाटनर फेरी सेक्स गर्न तयार हुदैनन् तसर्थ यदि सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ..
सँधैं जवान : बुढौलीबाट बचाउने खानपान
जिब्रोले स्वाद चाख्छ । आँखाले यौवन दाँज्छ । तन बुढो भए नि मन बुढो हुँदैन । तर मन मात्र होइन तन नै युवा बन्न भने जिब्रोसँग सम्झौता गर्नै पर्छ । गाला चाउरी भयो, आँखा धमिलो देखियो, दाँत फुक्लियो, कान मधुरो सुनियो, स्वर धोद्रो हुँदै गयो, हात गोडा कम्न थाले र ढाँड कुप्रियो चिन्ता लिन छाड्नुहोस् । बरु जिब्रोको..
टेनिस सुन्दरी शारापोवाका केहि हट तस्वीरहरु
रुसी टेनिस सुन्दरी मारिया शारापोवा आज आफ्नो २८ औं जन्मदिन मनाईरहेकी छिन् । उनको जन्म १९ अप्रिल १९८७ मा रुसको साइबेरियामा भएको थियो । शारापोवाले ओलम्पीक लगायत कयौं मेडल आफ्नो नाममा दर्ज गरिसकेकी छिन् । २००५ मा बिश्वभरकी नम्मर वान टेनिस खेलाडि बनेकी उनी शुन्दरता र फिटनेस फिगरका कारण पनि बिश्वभर..
मेकअप गर्ने महिलालाई खतरै खतरा : अध्ययन
एजेन्सी- एक अध्ययनले महिलाको प्रजनन क्षमतासम्बन्धी अनौठो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययन अनुसार बढी मेकअप गर्ने महिलालाई सन्तान उत्पादनमा समस्या हुने देखाएको छ । मेकअपका प्रशाधनमा हुने रसायनका कारण महिलालाई प्रजननमा समस्या हुने शोधको दावी छ । कस्मेटिक मात्र नभएर शौचालयमा प्रयोग हुने रसायन र अन्य..
हेर्नुस् मनिषादेखि प्रियंकासम्मको दसैं
मङ्लबार, अशोज १७, २०७४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्राय एक्सन कर्टमा व्यस्त रहने कलाकारहरु दसैंमा पारिवारिक जमघट र टिका लगाउन व्यस्त रहे । कसैको दसैं खल्लो रह्यो भने अधिकांशले देशभित्र र बाहिर टिका लगाएर दसैं मनाए । ‘डियर माया’ फिल्मबाट बलिउड फिल्म क्षेत्रमा पुनआगमन गरेकी अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफ्नो परिवारसँग दसैं मनाएकी छिन्..
फिटनेस फर्मुलाः यसरी राखौ शरीरलाई फिट एन्ड फाइन
मङ्लबार, अशोज १०, २०७४ मा प्रकाशित
शारीरिक व्यायामले शरीर फिट रहन्छ र स्वस्थ्य पनि । फिजिकल फिटनेसको लागि नियमित योग र व्यायाम जरुरी हुन्छ । व्यायामले मांसपेशी मजबुद हुन्छ र हृदय प्रणाली पनि ठीक हुन्छ । नियमित व्यायामले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ । हृदय रोग, टाइप -२ डाइविटिज, मोटोपनको समस्या पनि झेल्नु पर्दैन । व्यायामले..
जिन्दगीमा धनी ब्यक्ति बनेर विश्व चर्चित बन्न चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यि उपाय
ज्याक मा एसियाकै धनी व्यक्तिको सूचीमा परेका व्यवसायी हुन्, ज्याक मा । २०१६ मा ब्लुमबर्ग इन्डेक्सअनुसार विश्वकै चर्चित अनलाइन रिटेल कम्पनी अलिबाबा ग्रुपका अध्यक्ष ज्याकको सम्पत्ति २३ अर्ब डलर छ । त्यसो त सबै धनी मान्छे सुखी हुँदैनन् । ज्याक मासँग धन र सुख दुवै छ । केही दिनअघि आफ्नो कम्पनीको..
धेरै पोर्न फिल्म हेर्ने महिला कुन देशमा बस्छन् ?
काठमाण्डौं । संसारको सबैभन्दा ठूलो ‘एडल्ट डाटा एनालेसिस’ साइट ‘पोर्नहब’ का अनुसार पोर्न फिल्म हेर्नमा सबैभन्दा बढि पाकिस्तानी महिलाहरु रहेको दाबी गरिएको छ । ६० करोड महिलाहरुले पोर्न फिल्म हेर्ने गरेको र सबैभन्दा बढि पाकिस्तानी महिलाहरुले उक्त फिल्म हेर्ने गरेको उल्लेख छ । उक्त वेवसाईटले अमेरिका,..
काठमाडौं । मध्यरातमा निद्राबाट ब्युँझेपछि फेरि सुत्न निकै समस्या हुने गर्छ। यसरी सुत्न नसक्दा भोलिको दिनभरी तनाव हुने गर्छ। उठेपछि कसैको घडी हेर्ने र पानी खाने बानी हुन्छ । निद्रा विशेषज्ञका अनुसार यी दुई चीज मध्यराती उठ्ने बेला कहिलेपनि गर्नुहुँदैन। राति उठेर घडी हेर्ने बानी नगर्नुस् राति..
नवीना महर्जन फेसन डिजाइनर दसैँ नजिकिँदै छ। बजारमा ड्रेस किन्नेको भिडभाड बढ्दै छ। बजार घुम्दा डमीलाई लगाएका सोपिस सबै राम्रो भएजस्तो देखिन्छ र किन्न मन लाग्छ। बजारमा अरू कसैले लगाउँदा सुहाएको लुगामा पनि मन आकर्षित हुन्छ। आफूलाई पनि सुहाउला भनेर किन्ने गरिन्छ। तर, फेसन डिजाइनरहरू भन्छन्– यस्तो लहडमा..
५२ वर्षको उमेरमा विकनी योगादेखि क्लिभेज प्रदर्शन (फोटोफिचर)
एजेन्सी : आफ्नो उमेरभन्दा उनी झन्डै आधा उमेरकी देखिन्छिन्। ५२ वर्षीया बेलायती अभिनेत्री एलिजावेथ हर्ली फेरि बिहीबार फेरि आफ्ना नयाँ अवातरमा देखिएकी छिन् । रोयल्स टेलिशृंखलाकी यी अभिनेत्रीले विकनीमा योगा गरिरहेको फोटो इन्स्टाग्राममार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् । लिज हर्ली भनेर चिनिने यी..
अनुहारको चमकतालाई कायम राख्न के गर्ने ?
शनिबार, भदौ २४, २०७४ मा प्रकाशित
कुनै पनि मानिसलाई अर्को मानिसले पहिलो पटक हेर्ने भनेको उसको अनुहार हो। यदी अनुहार राम्रो देखेमात्र अन्य कुरामा मानिसले उक्त व्यक्तिबारे चाँसो दिन्छन्। त्यसैले अनुहार सुन्दर हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। अनुहारमा रहको हरेक मानिसको चमकता उमेर अनुसार नै परिवरत्न हुँदै जान्छ। अर्थात् अनुहारको चमकता..
सुत्नुअघि अपनाउनुस् ७ ब्युटी टिप्स
सुन्दर मुहार चाहने अधिकांशले बिहान मुख धुने, क्रिम तथा लोसन लगाउने काम गर्छन् । तर, अनुहारको केयर बिहान मात्र गरेर सुन्दरता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा गलत हो । आफ्नो मुहार हरेक समय ताजा तथा चम्किलो बनाउने चाहना छ भने रातको समयमा पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ । राति सुत्नुअघि थोरै मात्र मिहिनेत गरेर..
मौसम परिवर्तन, वातवारणिय प्रदूषण, गलत आहार विहार, प्रतिरक्षा प्रणालीको क्षय, असन्तुलित भोजन, मानसिक तनाव, व्यायम र विश्रामलाई प्रश्रय नदिने जीवनशैली, कामको आपाधापी आदिले शरीरमा दोष प्रकोपलाई वढाउँछ । यो भनेको शरीरमा कमजोर, जिर्ण र रोगी हुनु हो। यस्तो अवस्थामा शरीरलाई दोषमुक्त बनाएर पुन स्वस्थ्य..